नेता तन्त्रको घिनलाग्दो तस्बिर ! – Himalitimes
नेता तन्त्रको घिनलाग्दो तस्बिर !
| प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस २०, २०७६
सुन्नमा आएअनुसार, प्रचण्ड जस्ले आफुलाई सर्बाहाराको नेता हुँ भनेर चिनाउन आज पनि सरम मान्दैन्न ,उ एक्लैको मात्रै १५ खर्बको सम्पत्ति छ भन्ने सुनिन्छ ।,तर ३ तोला सुन र एक कट्ठा माटो देखाउछ सम्पत्ति विवरणमा । अझ छोराछोरी, ज्वाई, नाति, नातिनि, श्रीमति, सम्धी-सम्धिनी को नाममा राखेको जोड्ने हो भने त कति कति पुग्ला ? सिलिगुडीदेखि स्विस बैंकसम्म, दुबईदेखि अमेरिकासम्मका बैंकमा प्रचण्ड परिवारका नाम छन ।
प्रचण्ड त एउटा पात्र मात्रै हुन । जनयुद्धको नाउमा देश र जनता लुटेर अर्वपती र खर्वपती हुने प्राय: सबै टाउकेहरु हिजोआज देश चलाउदैछ्न ।कसैले कसैलाइ सोध्न सक्दैन किनभने सबैले मिलिमिलि देश र जनता नै लुटेका हुन ,र लुटिनै रहनेछन किनकी जनता यहाँ कित्ता कित्ता मा छन, राजनैतीक दल जति सबै एक अर्काको चौकिदार र रमिते बनेका छ्न । कस्ले कस्लाई सजाय दिने? खै Check & Balance गर्ने निकाय? अख्तियार आफै भ्रष्ट छ, न्यायालयमा नेताका कार्यकर्ता मात्रै छन ।
प्रचन्डको नाङ्गो तर भ्रष्ट नाच !
अजय सुमार्गीको ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर नेपाल आउछ। विभिन्न बिबाद, अन्योल र राजनीतिक दलको एकोहोरो ढिप्पी अनि अदालतको एकतर्फी निर्णयले बाइज्जत “रिलिज” हुन्छ। यो रकम पनि एउटा सिम्बोल मात्रै हो । यस्ता कति आए कति गए ……..
विदेशी मुद्रा कसरी र कुन आधारले नेपालीले यसरी ल्याउन पाउछ? रास्ट्र बैंकले रोकेको जस्तो गर्छ । अलि दिनमा रकम भुक्तानी हुन्छ । रकमको श्रोत के हो कसरी आयो? कसैलाइ चासो छैन ।, भन्दा पनि सबैलाई थाह छ, तर बोल्दैनन किनकी उनिहरुले पनि यसरी नै भित्र्याका थिए, चाहे त्यो रकम होस या सुन । कसरी आउँछ भगवान जानुन…या प्रचन्ड,या ओली र शेरबहादुर । अर्कोतिर आईएमई र प्रभु मनी जस्ताले खाडी र
विदेशमा पसिना बगाएका नेपालीको कमाइ उतै राख्छ, अर्थात रेमिट्यान्स त आउछ तर डलर आउँदैन। यिनिहरुको उठ, बैठ सिधै प्रचण्ड ,ओली, र शेरबहादुर सङ्ग छ। राजनीतिक दलहरु सबै यिनिहरुको चम्चागिरी गर्छन्, किनकी यिनिहरुले तिन्का कालो धनलाई सेतो बनाइदिन्छन । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर ओली भट्याउछ तर “भाट-भटेनी” ले मजदूरको रगत चुसी राखेको छ । किन कोइ पनि बोल्दैनन ? किनकी त्यसमा प्रचण्ड को लगानी छ। मार्सी प्रसाइको अस्पातलमा कसैले केही बोल्न पाउदैन किनकी त्यस्मा समेत प्रचण्डको लगानी छ। सुमार्गीलाई कसैले छुन सक्दैन, किनकी उस्ले प्रचण्डको पैसा तह लगाएको छ।
सुन्नमा आएअनुसार प्रचन्ड एक्लै को मात्रै १५ खर्बको सम्पत्ति छ। बाँकी परिवारको कुरो थाहा भएन। नेताहरुको हिसाब लाउदै गरौला । कर्मचारी र आसेपासे सबै मिलाउदा ८५ खर्ब भन्दा बढी सम्पत्ति प्रचण्डको छ भन्ने सुनिन्छ । २०४६ साल यता…! कसरी आयो, कताबाट आयो थाह छैन। र थाहा हुने जती देश र दल चलाऊछन।
राजा र राजपरिवारको सम्पत्ति स्विस बैंकमा पैसा छ, देश लुटेको हो राजपरिवारले, भन्ने मनगढन्त हौवा फैल्याएर विदेशीको इसारामा राजालाई र राजपरिवार लाई बहिर्गमन तिर लगियो। राजपरिवार र राजा यति धेरै इमान्दार र देशभक्त देखियो कि जनता नमरुन, जनताको चाहना भनेर गद्दी समेत त्यागिदिए र आज जनताको बिचमा खुलेआम हिड्दैछन । तिम्रा नेताले यसरी छाती खोलेर हिडेको देखाउ त? भनेपछि नेता बैमान र राजा इमान्दार, प्रस्ट भएन र? आज हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, नाङ्गो तस्वीर छ ।,तर कसैलाई सजाय हुदैन किनकी सबै लुटेरा छन ।
उग्रगामी आर्थिक छलाङ्ग भनेको नेता, तिन्का श्रीमती, छोराछोरी, नेताका आसेपासे, तीन पुस्ते, ससुराली र मावली खलक बाहेक जनताले अनुभुती गर्न सकेका छैनन ।,मात्रै हरेक नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी थोपरिएको छ-आज प्रत्येक नेपालीको नाउँमा ४० हजार ऋण पर्छ या पारिएको छ । राष्ट्र बैंकमा डलर छैन, निर्यात ठप्प पारीएको छ। डलरको नाङ्गो खेल नेता, मन्त्री, कर्मचारीले खेल्छन। बुझ्ने बौद्धिक र पत्रकार भनाउदा, आर्थिक मामिलामा जान्कारहरु २ लाखमा आफुलाई धितो राखेरे देश र जनता प्रति गद्दारी गर्न सधैं अगाडि देखिन्छन् ।
जनता ,मेरो दल, मेरो नेता, मेरो सिद्धान्त भनेर ताली मार्दैछ्न ।मेरो दलले होइन तेरो दलले । मेरो नेताले होइन, तिम्रो नेताले । फेरी लाउडादेखि लडाकु,आयल निगमदेखि महाकाली आउछ जान्छ । फरि अर्को वाइडबडि आउछ-जान्छ,टेलिकमको 4G घोटाला र Ncell को हिसाब खै? कस्ले माग्ने ?अनि ….हामी …कित्ताकित्तामा उभिएर काङ्ग्रेस हो कि क्या हो? कम्युनिस्ट स्कुलिङ्ग बाट आयर बोल्दैछस ? आदि भन्दै आफ्नो खुस्केको धोती, चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको देश अनि अन्धकार हाम्रो भविस्य देख्नै सकिराखेको छैनौं । हामी फेरी मेरो नेता जिन्दाबाद भन्न छाडेको छैनौ । कहिलेसम्म सम्म नेता र सिद्धान्तको दास हुने? कहिलेसम्म नेताको झोला बोक्ने? कहिलेसम्म खाडीमा बस्ने? कहिलेसम्म बलात्कृत हुने? अझै चेत आउदैन?
यहि अबस्था रहिरह्यो ,यहि व्यवस्था चलिरह्यो भने न त नेपालमा विकास नै हुन्छ, न त गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ नै हामिले पाउछौ ।, किनकी यहाँ देशलाई दुखेको बेला पनि हामी नेताको उपचार गराउन तल्लिन छौ। बाटो घाटो, रेल, मोनोरेल र जहाज भनेको सर्भे र सम्भावनाको भाषण मात्रै हो! ३०औं बर्ष हुदा पनि एउटा मेलम्ची आउदैन । जाबो तुइन समेत बिस्तापित हुदैन भने मोनोरेल जस्ता कुरा भनेका बिरबलको खिचडी मात्रै हो । झोले र हन्माने हुँदैमा देश परिवर्तन हुँदैन,अलिकती देशको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । अब देश बनाउने हो भने राजसंस्थामा निहित निर्दलिय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र यी नेता र भ्रष्ट कर्मचारीको तीन पुस्तेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा दुई मत कसैको नहोला । र गरिनुपर्छ पनि ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस २०, २०७६ 10:06:35 AM |
Prevरुपन्देहीमा पृथ्वी जयन्तीको भव्य तयारी ,शिव सेना र राष्ट्रवादी शक्तिहरु जुटे तयारीमा
Nextगणतन्त्रपछि पहिलोपटक एतिहासिक रूपमा मनाईदै पृथ्वी जयन्ती